Haweenay soo Bandhigtay Fadeexad Dimuqraadiyadda Laf-jab ku ah oo ka Dhacday Guriga Cirro
Hargeysa (Dawan)- Hoggaankii Abaabulka iyo Wacyigelinta ee Waddani Faadumo Aadan Cawad iyo Hoggaanka Waxbarashada ee xisbigaas,Deeqa Dhamac Cadilaahi, ayaa shaaciyey inay ka baxeen xisbigii ay ka tirsanaayeen oo ay ku tilmaameen mid aan lagu aamini karin talada waddanka.
Waxa kaloo ay sidaas ku sheegeen shirjaraa’id oo ay shalay ku qabteen Hargeysa, waxaanay ku eedeeyeen xisbiga Waddani inaanu lahayn himilo siyaasadeed oo ay ku hoggaamiyaan talada dalka. “Waxaan si rasmi ah iskaga casilayaa xilkii aan ka hayay xisbiga mucaaradka ah ee Waddani iyo xubinimadii golaha dhexeba.Ma leexleexanayo, beenna sheegi mayo, waxaan caddaynayaa inaan ku biiray xisbiga talada dalka haya ee Kulmiye. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Waddani-na waxaan u sheegayaa in ragga iyo dumarka la joogaaba ay boqnaha jarayaan,”ayay tidhi Faadumo Aadan Cawad.
Faadumo waxay intaas ku dartay in Guddoomiye Cirro uu habeen ku xidhay gurigiisa rag ardaagiisa ka mid ah oo doonayay inay ku biiraan xisbal-xaakimka Kulmiye, isla markaana ay aad u la yaabtay dhacdadaas.
“Waxa la is weydiinayaa maanta Faadumo xisbigii ay muddadaas dheer dhex joogtay maxaa ka kaxeeyay? Horta waxa la odhanayaa qabyaalad baa kaxaysay. Haddii ay qabyaaladi i kaxaynayso maalin arrin igaga dhacday oo igaga fool xumayd intii aan Waddani ku jiray ma aan arag anigu. Waxa dhacday niman reer Hargeysa ahaa oo geerash Aw Aadan inamada haysta. maan ogayn in inamadaasi ay yihiin raaska Guddoomiyaha Waddani. Guriga Cirro ayaan subax hore tegay, waxaanan tegay hool guriga ka yaalla oo Xildhibaannadu ku qayili jireen oo niman ku qufulan yihiin.
Gabadh Canab la yidhaahdo ayaa igu tidhi ‘Faadumoy miyaad og tahay xalay inkaarta nagu dhacday’ waxaan ku idhi maxaa idin helay? waxaanay tidhi ‘Rag ay isku raas yihiin guddoomiye Cirro ayaa naloo sheegay inay Kulmiye ku biirayaan, kadibna xalay ayaanu soo qabanay oo waa kuwa qol guriga ka mid ah ku xidhan.’ Hadalkii gabadhu ii sheegtay aad baan uga xumaaday oo waan gariiray, nimankiina aqal baa laga soo furay, iyadoo xalay oo kale guryahoodii laga soo qaaday, KULMIYE-na saaka oo kale xaflad u qaban lahaa,”ayay tidhi, waxaanay intaas raacisay; “Nimankii oo la soo furay ayaa fadhi Cirro fadhiyay ayaa la geeyay intaan ka dabogalay ayaan ku idhi Guddoomiye dimuqraadiyadda sidaas maaha. Raggan Muuse Cabdalle ee aad guriga ku xidhatay tallow anigu miyaan waayay cid i xidhata, kadibna waan iskaga soo baxay.”
Sidoo kale Deeqa Dhamac Cabdilaahi ayaa sheegtay inay uga baxday xisbigaas markii loo diiday inay ku shaqeyso xilka hoggaanka waxbarashada ee ay ku magacownayd; “Waxaan shaacinayaa inaan iska casilay xilkii aan ka hayay xisbiga Waddani iyo xubinimadii golaha dhexeba.Xisbiga mucaaradka ah ee Waddani waxaan iskaga casilay waxa la ii ogolaan waayay inaan ku shaqeeyo xilkii aan ka hayay xisbigaas,”ayay tidhi Deeqa Dhamac, waxaanay iclaamisay inay u digo roganayso oo ay ku biirayso xisbal-xaakimka Kulmiye. Waxa muddooyinkii u dambeeyay isa soo tarayay siyaasiyiin iyo xisbi yahanno kala duwan oo ka dhaqaajiyay xisbiga mucaaradka ah ee Waddani oo ay sheegeen in gaadhin heer lagu aamini karo hoggaaminta Jamhuuriyadda Somaliland isla markaasna ay taladiisii ku ururtay kooxda musdambeedka.